Ndiongorore! Kuburitsa madhora | Martech Zone
Ndiongorore! Kuburitsa madhora
Chishanu, Mbudzi 17, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Sponsored Post: OngororoMe
PayPerPost uye ReviewMe payakatanga kubuda, ndakanga ndanyadziswa. Ini ndainzwa chaizvo sekunge 'blogging yemadhora' yaizotora mukana kune wakaipisisa. Manheru ano ndacherekedza mashoma mashoma pane mamwe mablog ayo OngororoMe ainyatsoshandisa yavo sisitimu kubhadhara mabloggi kuti vazviongorore Yakabata pfungwa dzangu saka ndakasaina kuti ndione.
Iyo pfungwa inonakidza. Zvichienderana nekuburitswa kweblog rako (Alexa, Technorati, RSS, nezvimwewo), yako blog inopihwa dhora remari yauchazobhadharwa iwe paunopedzisa ongororo. Mune mamwe mazwi, iwe unobhadharwa zvinoenderana nehuwandu hwevanhu vanoverenga yako blog. Kwete zano rakaipa. Ini ndinofunga iyi inogona kunge iri nzira yakanaka yevashambadzi. Zvimwe pane izvo…
OngororoMe haidi kuti iwe unyore kuongorora kwakanaka! Mune mamwe mazwi, iwe unogona kunyatso kuva akatendeseka. Ini ndinofunga izvo zvinokwezva vashambadziri vane zvigadzirwa zvikuru, asi ReviewMe iri kuzodzinga vashambadzi vasina hunhu. Hei! Izvo zvakanaka kwatiri tese, handizvo here? Chinhu chekupedzisira chandiri kuda kufambisa kune vanhu vanoverenga blog yangu kuyedza kuita vaviri mari. Izvo zvingave zviri kuisa vaverengi vangu panjodzi uye ndicho chinhu chandakaisa mune ROTO yenguva ndichiedza kuvaka. Handina zita hombe kana mabhiriyoni emadhora, saka ndiri diki-nguva. Vanhu vanowanzo tenderera vakomana vakuru.
Chimwe chinhu chandinoyemura ndechekuti ivo chido iwe kuti uve pachena kuti iblog blog iyo yauri kubhadharirwa:
Iwe unofanirwa kuzivisa kuti iyo positi ipositi yakabhadharwa neimwe nzira. Heano mamwe mazano: "Sponsored Post:", "Iyi inotevera ongororo yakabhadharwa:" "Kushambadzira:".
Saka kubva pakuona bhizinesi, ndinoremekedza ServiceMe's service uye ndinovashuvira zvakanaka! Pane dzimwe nguva dzandinonyatsogona kuedza kufunga nezve positi yekuisa, asi ndakanamatira pakati pedombo nenzvimbo yakaoma. Kana ndikasatumira zuva nezuva, ndinonyatsoona mafambiro ari munzira yakaderera. Kana ndikatumira zuva nezuva, ndinoona yekumusoro ichisimuka mumugwagwa. Zvemukati IS mambo neangu blog. Chandisingade kuita kutambisa nguva yako pano, zvakadaro. Nekudaro, ini ndakakanganwa zvakatumirwa pane mamwe mazuva pandakanga ndisina kana chinhu chinovaka chekuwedzera pane yedu hurukuro.
Ndiri kuzoedza Ongororai kwechinguva… kwete sosi yemari, asi ndiri kuenda kuzoona kana ichigona kuzadza iwo 'mavoid' kwandinofanira kutumira nezve chimwe chinhu asi ndisina zvakakwana kuti ndienderere mberi. Ndichava akatendeka nemi vanhu, zvakare, uye ndikuzivisei zviri kuitika. Ini handidi kuisa hukama hwedu panjodzi!
Kana iri sevhisi, yakatwasuka kumberi. Ini ndinofanira kutaura kuti saiti iri kuvhiringidza segehena, zvakadaro! Iko kune yevanoshambadzira chikamu uye blogger chikamu. Zviri nyore kuona kuti ndeipi divi remutsara wauri, asi saiti haina kunyatso kumisikidzwa nenzira iyoyo. Iko kune yakatwasuka menyu, kuruboshwe menyu, zvadaro sarudzo mukati menzvimbo yemukati, tsoka yetsoka…. Ndichiri kurangarira ndichiona chinzvimbo changu imomo kumwe kunhu asi handisi kuziva kuti ndodzokera sei ikoko !!
Saka… chikuru chigadzirwa, lousy usability. Zano rangu raizove revaya vari kuReviewMe yekumepu zvese zvebhizimusi maitiro ayo vashambadzi kana mabloggi anotora kuburikidza saiti… kunyoreswa, kuwedzera blog, kuwedzera ongororo, kumisikidza kubhadhara, nezvimwe uye wozogadzira chinongedzo chakakomberedza icho hutungamiri uye maitiro ebhizinesi. Ini ndinofunga ndaizoita HUGE mutsauko pakati peiye mushambadzi uye blogger mapeji uye maitiro. Kuva nemabhatani ari pamusoro peumwe kushamisa uye hakusi kuita.
Zvakanaka, ndizvozvo! Uku ndiko Ongororo yangu yekutanga paReviewMe… yeRondedzeroMe! Ndinovimba unokoshesa kutendeseka kwangu.
Nei vashandi vakuru vachienda? Nei makambani makuru achifanira kutora basa?
Zvita 1, 2006 na1: 53 PM
Kuteedzera: Ini ndakagamuchira mubhadharo kuburikidza nePaypal yeiyi yekupinda nhasi.